Iwo mapikicha online haaite kururamisira ne mashiripiti Cinque Terre nharaunda muItari. Dzimba dzinoyevedza dziri kumusoro kwemakomo, yakakomberedzwa neminda yemizambiringa, maresitorendi emuno, uye Hiking mudungwe munzira, vese vanoita dunhu iri inoshamisa yekudonha kwekufamba kuenda kuEurope. Cinque Terre zvechokwadi ine 8 misha midiki nechitima chechitima chinobatanidza vese kune mumwe nemumwe. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kushanyira yega yega misha yekumo 2-3 mazuva kana iwe uri mupfupi munguva. Chii chinogona kuve chiri nani pane kurovedza hopping mune imwe yenzvimbo dzakanaka muEurope mukudonha?
Iyo Makotplatz Old Town uye wachi yejecha inzvimbo yakanaka yekutanga yekuziva iyo yeGothic architecture. Unogona kuenderera kune inoyevedza New Town Hall, chivakwa chikuru-chakaita seimba yakatarisana negungwa. Nyika dzakasvibira nemiti zvakatenderedza imba huru uye vanopedzisa mamiriro ekunze uye kuona mune endarama mavara.
Hannover imwe yematombo eGermany uye haigoni kuve akajeka mukudonha. Kana iwe uri kuronga zororo rekudonha kuenda kuEurope, ipapo Hannover ndiyo yakakodzera yekufamba kuenda. Havasi vashanyi vakawanda vatenderi vakawana mashiripiti ayo, saka, iwe unogona kuve wekutanga kuve nenguva yehupenyu hwako muguta.
Rissbachtal Valley uye Karwendel Alpine Park, inzvimbo inoshamisa yekufamba muAustria yezhizha yezororo. Nzvimbo yeAlpine yeAhornboden ine 2,000 zera Sycamore-Maple miti inotarisa inopenya mukupfeka kwavo kweruva yegoridhe neorenji. Masikirwo nemakomo zvinogadzira chimiro chakanakisa nzvimbo yekukanganwa yekufamba kwekuenda muEurope.
Magadheni uye akawanda maonero anoona anotyisa anotyisa eguta rose uye rakatenderedza. mukudonha maonero iwo akanyanya kunaka mumavara eumumvuri. saka, neLuxembourg riri guta diki kwazvo muEurope, inomira ichizvikudza padyo nemaguta makuru epasi rose seParis. Izvo zvakafanira kusarudza Luxembourg kuzororo rako muEurope mukudonha.
Kutenda kune epamberi njanji masevhisi, iwe unogona kuenda kune chero nzvimbo muEurope pasina nguva. Kubva kuguta rakakura cosmopolitan kune guta diki uye rinoshamisa, guta roga roga pane redu 10 maguta akanakisa kwezororo rekudonha muEurope, has its unique charm and magic.
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Kwakanakisa Kubvira Zororo MuEurope” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-fall-vacations-europe/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)